Bacinga ntoni abaThengi malunga neNdawo eNtsha yeMidiya? | Martech Zone
Bacinga ntoni abaThengi malunga neNdawo eNtsha yeMithombo yeendaba?
NgoLwesihlanu, Julayi 3, 2015 Douglas Karr
Kukho ukungxama okunomdla xa ucela ingxelo ngophando xa kuthelekiswa nokuqokelela okwenyani ukuziphatha. Ukuba ubuza nawuphi na umthengi ukuba uyayithanda na intengiso, abambalwa abakhethiweyo banokutsiba baye ezantsi malunga nokuba abanakulinda njani ukuba intengiso elandelayo ivele kuFacebook okanye kwintengiso elandelayo ngexesha lomdlalo wabo kamabonwakude. Zange ndadibana nalo mntu…
Inyani, ewe, kukuba iinkampani zibhengeza kuba ziyasebenza. Utyalo-mali. Ngamanye amaxesha utyalomali luhlala ixesha elide kulwaziso lwebrand kwaye lufikelela apho ukubuyela ngokuthe ngqo kutyalomali kungalindelwanga. Ngamanye amaxesha, liphulo elinamandla… mhlawumbi isaphulelo… ekufuneka iqhube impendulo kwangoko. Ngelixa abathengi besithi abayithandi intengiso, kwaye banokuyiphepha intengiso, basabela xa intengiso ihambelana nemidla yabo okanye neemfuno.
Elo lilizwi nje lokulumkisa xa uhlalutya impendulo yophando. Iziphumo zolu phando zivela kwiqela le-Acquity zenza umsebenzi omkhulu wokuthelekisa indlela abathengi abasabela ngayo kumajelo eendaba amatsha xa kuthelekiswa namajelo emveli. I-Facebook, umzekelo, isondele kwigunya lentengiso yamaphephandaba. Nangona kunjalo, iTV kunye nePrinta isengumnini wentengiso yokuqhuba abathengi abatsha ngomxholo onophawu.
Ndihlala ndisithi abathengi abayi kuFacebook ukuya kwenza ukuthenga kwabo okulandelayo, ke andithandabuzi ukuba akukho luxabiso lukhulu kumxholo oxhasiweyo apho- nangona izaphulelo zinokusebenza. Ngamanye amagama… abathengi abakukhathalelanga ukungena kubudlelwane bobuqu kunye negama lakho - banike isivumelwano ukuba bayakwenza.
Iqela le-Acquity, eliyinxalenye yeAccenture Interactive, kuvavanywe abathengi abangama-2,000 2015 base-US kulindelo lwabo lokuzibandakanya kwegama kwindawo yentengiso eguqukayo. Baphonononge imikhwa yabo kunye nezinto abazithandayo ezijikeleze ukubandakanyeka kwidijithali, iivenkile kunye neenkonzo ukuze bafumane iindlela eziza kuba nefuthe kwiimveliso kwi-XNUMX nangaphaya.
Amathuba, ngokoluvo lwam, asebenzisa iimfuno zabathengi bakho ukufaneleka kunye nempendulo. Ukuba abathengi babona ukuba ukuzibandakanya nophawu lwentengiso kuya kubafumanela le nto bayifunayo kwaye xa beyifuna, baya kubhalisa!
Khuphela ingxelo epheleleyo-kwiQela le-Acquity, 2015 Isizukulwana esilandelayo soFundo lwezoRhwebo.
tags: isimilo sabathengiimfuno zabathengiUkuphendula kwabathengiukunyaniseka kwabathengiizaphuleloFacebookgeolocationukunyanisekamivuzoiintlawulo mobileushicileloukukhulisa intlaloizaphulelo zentlalo
I-Finesse: Faka, Yongeza iiMveliso, Yenza iMali.
Happy 4 kaJulayi! Inokuhlawula ukuba yiPatriotic kwiiMidiya zeNtlalo
Jul 8, 2015 ngo-7: 07 AM
Isaphulelo kwimbono yam ayisebenzi kakhulu kwisiseko somsebenzisi kwi-facebook nakwi-twitter.
Jul 8, 2015 ngo-11: 23 AM
Andinguye umlandeli omkhulu wesaphulelo, Paul. Ndiziva ngathi ufumana abathengi abangalunganga ebhodini kwaye uyayixabisa imveliso okanye inkonzo yakho. Kodwa uphando luqhubeka luthi abantu balandela iimveliso kwiimidiya zentlalo kuba balindele ukuthengiswa, izaphulelo okanye amatikiti.
Sep 18, 2015 ngo-4: 16 PM
Hee uDouglas, ungathi ziphi iinkampani ezi-5 eziphezulu ezenza ifuthe kwimedia media lanscape?
Sep 19, 2015 ngo-7: 13 PM
Lo ngumbuzo onomdla kwaye uneempawu ezininzi kuwo. Ndihlala ndimadolw 'anzima ukubanga "phezulu" kuba kufanelekile kwiimfuno zeshishini kunye nendlela abanxibelelana ngayo ngempumelelo nethemba labo. Kuba entsha yeendaba:
Ndicinga ukuba kukho iinguqu ezimangalisayo eziza nevidiyo ukuze ndivule ngazo Blab. Isakhono sokuba nale nkomfa yevidiyo ivulekileyo kunye nokuthatha inxaxheba kwabaphulaphuli yahlukile kwaye iyanelisa kakhulu.
ngene inokuba ilandelayo. Ngenxa yento yethutyana yohlaziyo, yenza ukuba amashishini kunye nabantu babonakale. Baziva bekhuselekile.
USysomo Gaze yinkqubela phambili enkulu ekubekweni kweliso kwimidiya yoluntu evumela iinkampani ukuba zimamele iimveliso zazo ziboniswe kwividiyo nakwimifanekiso kunokuba zikhankanywe kwisicatshulwa.
Optimove yinkampani esebenzisa ukufunda ngomatshini ukuqikelela kunye nokunikezela ngamava omsebenzisi afanelekileyo ukuqhubela phambili iindwendwe ezantsi kwiphaneli yokuguqula.
iapile Kuya kufuneka ukuba ikhankanywe… hayi kuba ndingumntu othanda ifeni, kodwa iApple Watch yinkqubela phambili kubuchwepheshe obunxitywayo obuthembisayo.